Iholide Elibulalayo Lephupho Ebusuku eCancun labavakashi abangu-3 baseCanada
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » adventure » Iholide Elibulalayo Lephupho Ebusuku eCancun labavakashi abangu-3 baseCanada
Ezivakashini ezintathu zaseCanada ezihlala e-Hoteles Xcaret Resort esifundeni saseCancun, e-Mexico, wonke amaholide azo ahlanganisa ubumnandi aphenduke iphupho elibi elibi.
Sengeza ubumnandi ekuhlanganiseni konke ku-All-Fun Inclusive™ yethu, umqondo omusha wezokuvakasha ozinzile onikezela ngemizwa engaphezu kuka-200. Lena incazelo ku- Amahhotela Xcaret iwebhusayithi endaweni yezivakashi ePlaya del Carmen eduze kwaseCancun, eMexico.
Ngokwemibiko yabezindaba yendawo, kushone isivakashi esisodwa namuhla, kanti ababili basesibhedlela sendawo belimele kabi okwenzeke ngesikhathi sokudubula. Izisulu bekuyizivakashi zaseCanada ezihlala kule ndawo yokungcebeleka
I-Secretariat of Security of the Mexican State of Quintana Roo iqinisekisa ukuthi izivakashi ezintathu zilimele ngemuva kokudubula. Khonamanjalo, kubukeka sengathi omunye wabashonile ushonile.
Lesi isiqephu esisha sodlame ngaphakathi kwe-Hotel Xcaret complex.
Lo que les cuento emsakazweni.
I-Nuevo episodio de violencia al interior del complejo Ihhotela Xcaretpic.twitter.com/2yiFp9bfl4
NgoNovemba 4, eTurboNews kubika ngabantu ababili abadutshulwe babulawa endaweni ephethwe iHyatt indawo yokuphumula ehlanganisa konke endaweni efanayo.
I-Ireland izochitha iningi lemikhawulo yayo ye-COVID-19 kusasa
Ukwethulwa Kophawu Olusha Lwezokuvakasha lwe-“Explore Uganda” kwenza i-Uganda ne-Afrika Tourism Ziziqhenye
Izimfuneko zempilo ezididayo zimisa abahambi...
IManchester United isichithile isivumelwano soxhaso lwe-Aeroflot
USir Paul McCartney Unikele Ngengoma Kwabangenamakhaya
INew Condor engami eFrankfurt iya ePhoenix nasePortland...
I-Fracking Fluids And Chemicals Market Competitive...
Imithelela yenkundla yezokuxhumana ekukhuleni kobuchopho bengane
Imiphumela Ebuyekeziwe Yokuhlolwa Komtholampilo Ekwelapheni i-Fabry...
I-US Manje Seyizovala Isikhala Somoya siye eRussia
IViking Ithatha Ukulethwa Komkhumbi Omusha Wasolwandle
I-Global Electrical Enclosures Market engaphezu kuka-35%...
I-Russian Nazi Propaganda isakazeka e-US isuka eCanada
I-De-Agglomerating Equipment Market 2022 Abadlali Ababalulekile...
Usayizi Wemakethe Yezithuthuthu Hub, Abadlali Ababalulekile, Ukukhula...
Ungalikhangisa kanjani ikhasi lakho ku-Instagram ngaphandle kokuchitha...
Inkampani yezindiza enezindleko eziphansi kakhulu enikezela ngezindiza ezintsha zaseCanada
I-WestJet iqamba iPhini Likamongameli Omusha, uCargo
I-International Tourism Exchange e-Italy Ibuyela Kakhudlwana...
Ukufundwa komfutho wegazi kangcono ekhaya noma kudokotela...
Ukwelashwa okusha kokuqala okuqondiswe kumetabolism yomdlavuza
Ukutholwa komdlavuza kusenesikhathi ngethuluzi elisha le-inthanethi
Ukwelashwa Okusha Kwezilonda Zezinyawo Zesifo Sikashukela
Iqiniso mayelana ne-Batam Marriott Hotel Harbour entsha...